SAWIRO:- Dadka Armenia oo u dabaaldagay iscasilaadda Ra’iisul Wasaaraha dalkaas – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaSAWIRO:- Dadka Armenia oo u dabaaldagay iscasilaadda Ra’iisul Wasaaraha dalkaas
SAWIRO:- Dadka Armenia oo u dabaaldagay iscasilaadda Ra’iisul Wasaaraha dalkaas
24/04/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Apr 24, 2018:- Dad ayaa damaashaad ka dhigay caasimadda Armenia ee Yerevan ka dib markii ay mudaaharaadyo ku qasbeen ra’iisulwasaare Serzh Sargsyan in uu is casilo.
Taageereyaasha mucaaradka ayaa Sargsyan ku eedeeyay in uu ka fuqi la’yahay xilka ka dib markii uu xilka ra’iisulwasaarenimada qabtay toddobaadkii hore isaga oo 10 sano dalka ka soo ahaa madaxweyne.
“Kacdoonka waddada waxaa lagu diidan yahay xilkayga. Waxaana ka dhabaynayaa dalabkiina,” ayuu yiri Sargsyan oo war qoraal ah soo saaray.
Karen Karapetyan oo ah ra’iisulwasaarihii hore ayaa xilka si ku meel gaar ah u qabtay.
Armen Sarkissian ayaa aqbalay iscasilaadda Sargsyan iyo xukuumadda.
Ku dhawaaqidda Sargsyan ayaa timid waxyar uun ka dib markii xabsiga laga sii daayay Nikol Pashinyan oo ah hogaamiyaha mucaaradka.
Pashinyan ayaa la xiray Axaddii ka dib markii uu ku baaqay in uu is casilo Sargsyan xili laga waraysanayay telefeshin.
Pashinyan ayaa markaas lala qabtay labo siyaasi oo kale oo mucaarad ah iyo 200 oo ruux oo mudaaharaad dhigayay.
Ninkii looga shakisnaa in uu Maraykanka dadka ku laayay oo la qabtay
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp: Salaax yuusan u turin kooxdiisii hore